Alaab -qeybiyeyaasha Nidaamka Qolka iyo Warshadda - Soo -saareyaasha Nidaamka Qolka Shiinaha
Miisaanka Ka -hortagga
Daaha Iftiinka Nabadgelyada
Badhasaabkii oo aad u batay
Wiishka oo Dhameystiran
Qolka Mashiinka Wiishka Rakaabka oo Yar
Wiishka Rakaabka Rakaabka Mashiinka
Eevator ee Dalxiiska
Wiishka Raadinta Rakaabka ee Mashiinka Qol La'aan
Ammaan ah, lagu kalsoonaan karo oo fudud si loo rakibo guddiyada albaabka wiishka
Wiishka Panoramic oo leh Codsi Weyn Iyo Sa sare ...
Baxiyaha Gudaha iyo Dibadda
Geedka Guur-guurka Hal Gear Ammaanka Degdega ah THY-OX ...
Gear Badbaadinta Horumarka Labaad Guurista THY-OX-18
Qalabka Xiisada Godka wiishka THY-OX-300
Ku celi Guddoomiyaha Gobolka wiishka Rakaabka Mashiinka ...
Caafimad leh, Bay'ada u fiican oo Quruxsan Qolka wiishka
Baabuurka wiishka ee Tianhongyi waa meel sanduuq lagu qaado oo lagu qaado shaqaalaha iyo alaabta. Baabuurku wuxuu guud ahaan ka kooban yahay baaburka baabuurka, dusha baabuurka, hoosta baabuurka, gidaarka baabuurka, albaabka baabuurka iyo qaybaha kale ee muhiimka ah. Saqafka badiyaa wuxuu ka samaysan yahay muraayad birta ka samaysan; xagga hoose ee baabuurka waa 2mm dhumucdiisuna tahay dhumucda qaabka marble ee PVC ama baakad marmar oo qaro weyn ah 20mm.
Sharaf leh, Iftiin leh, Qolladaha wiishka oo kala duwan oo dabooli kara Baahiyaha oo dhan
Baabuurku waa qayb ka mid ah jirka baabuurka oo wiishku u isticmaalo qaadista rakaabka ama badeecadaha iyo culayska kale. Qaabka hoose ee gaariga waxaa ku xardhan taargooyinka birta ah, biraha kanaalka iyo biraha xaglaha ee moodalka iyo cabirka la cayimay. Si looga hortago in jirka baabuurku gariiro, inta badan waxaa la adeegsadaa dogobka hoose ee jir.
Qaab -dhismeedka Miisaanka -Sare ee wiishka Saamiyada kala -goynta kala duwan
Qaab -dhismeedka miisaanka culus wuxuu ka samaysan yahay biraha kanaalka ama 3 ～ 5 mm saxan bir ah oo lagu duudduubay qaabka birta kanaalka oo lagu xardhay saxanka birta. Iyada oo ay ugu wacan tahay munaasabado adeegsi oo kala duwan, qaab -dhismeedka qaab -dhismeedka miisaanka miisaanka ayaa sidoo kale xoogaa ka duwan.
Wiishka Miisaanka La -Dagaalanka Ah oo leh Alaabo kala duwan
Miisaanka miisaanka culus ee wiishka waxaa la dhigaa dhexda miisaanka miisaanka wiishka si loo hagaajiyo culeyska miisaanka, kaas oo la kordhin karo ama la dhimi karo. Qaabka miisaanka wiishka miisaanka culus waa cuboid. Ka dib marka birta miisaanka culus la geliyo miisaanka miisaanka, waxay u baahan tahay in si adag loogu cadaadiyo saxan cadaadis si looga hortago in wiishku dhaqaaqo oo uu abuuro buuq inta lagu jiro hawlgalka.
Faham shirkadda iyo Wararka Warshadaha
Aagga Horumarinta, Magaalada Tangqiao, Magaalada Zhangjiagang, Suzhou